आँखाले देखेको सबै साँचो हुँदैन — Sanchar Kendra
एउटा सन्त एका बिहान भ्रमण गर्न समुन्द्र तटमा पुगे । समुन्द्र किनारमा उनले एउटा पुरुषलाई एउटी महिलाको काखमा टाउको राखेर सुतिरहेको देखे । नजिकै रक्सीको एउटा खाली बोतल पनि थियो । सन्त ज्यादै दुखी भए । उनले सोच्न थाले, बिहानै रक्सी खाएर महिलाको काखमा यसरी आफ्नो टाउको राखी कुरा गरिरहेको यो पुरुष कति विलासी मानिस रहेछ ।
केही समय पछि, समुन्द्रबाट आवाज आयो, “बचाऊ ! मलाई बचाऊ ! कोई बचाउनुहोस् !” सन्तले एक जना मानिसलाई समुन्द्रमा डुबिरहेको देखे । तर आफु पौडी खेल्न नजान्ने भएकोले, सन्तले हेरिरहन बाहेक अरु केहि गर्न सकेनन् ।
महिलाको काखमा टाउको राखेर निदाइरहेको व्यक्ति उठ्यो र त्यो डुब्ने मानिसलाई बचाउन पानीमा हाम फाल्यो । केहिबेरमा, उसले डुब्न लागेको मानिसलाई बचायो र उसलाई किनारमा ल्यायो । सन्त अचम्ममा परे कि यस व्यक्तिलाई नराम्रो भन्नु वा राम्रो ! सन्त त्यो व्यक्तिकहाँ गए र सोधे, भाई, तिमी को हौ, तिमी यहाँ के गर्दै छौ ?
ती व्यक्तिले जवाफ दिए- “म मछुवारा हुँ, माछा मार्ने काम गर्छु । धेरै दिन पछि मैले यो समुन्द्रबाट माछा पक्रेर आज बिहानै यहाँ फर्कें । मेरी आमा मलाई लिन आउनु भयो र घरमा अन्य कुनै भाँडा नभएकोले रक्सीको बोतलमा पानी ल्याएर आउनु भयो । धेरै दिनको यात्रा बाट थकित भएको थिएँ र बिहानको रमाइलो वातावरणमा यो पानी पिएर थकान कम गर्न, टाउको आमाको काखमा राखेर कतिबेला निदाइहालेछु, थाहै भएन ।”
ति व्यक्तिको कुरा सुनेर सन्तको आँखाबाट आँसु झर्न थाले । उनले मनमनै सोचे -” कि म कस्तो पापी मानिस हुँ, जो देखें, त्यसको बारेमा मैले गलत सोचें जबकि वास्तविकता फरक थियो ।”
शिख – कुनै पनि चीज जुन हामी देख्छौं, सधैं यो जस्तो देखिन्छ त्यस्तै हुँदैन, यसको अर्को पक्ष पनि हुन सक्छ । के हाम्रो सोच यस्तै भई सकेको छ र, जो देखिन्छ त्यसैलाई नै सत्य मानी हाल्ने ? कसैको बारेमा केही धारणा बनाउनु अघि सय पटक सोच्नुहोस् र निर्णय लिनुहोस ।
प्रज्वलप्रति दुई शब्द – देशले रगत माग्यो, तिमीले वलिदान दियौ